Qorshayaasha iyo Hadiyadaha Maalinta Jacaylka | Ragga Stylish
Maalinta Jacayl waxaana jira shaki ku saabsan waxa aan siin karno lamaanaheena. Waxaa jira dad badan oo doorbida inay maalintan wada qaataan iyaga oo aan hadiyado lahayn. Si kastaba ha noqotee, aqlabiyadda badan waxay rabaan inay ka yaabaan lamaanahooda iyaga oo siinaya faahfaahin kooban oo uu ku xasuusan karo waqti ka dib. In kasta oo Maalinta Jacaylka ay leeyihin dad fara badan oo wax difaacaya iyo inyar oo difaac ah, waxaannu qormadan u hibeynaynaa soo-jeedinta fikradaha ku saabsan qorshooyinka iyo hadiyadaha taariikhdan.
Haddii aadan wax fikrad ah ka haysan qorshaha ama hadiyadda aad u samaynaysid lamaanahaaga, kani waa boostadaada.
1 Difaacayaasha iyo sharaf dhaca Maalinta Jacaylka
2 Maalinta fikradaha hadiyadaha Maalinta Jacaylka
2.1 Casho jaceyl ah oo muusig toos ah la socota
2.2 dalxiiska dabiiciga
2.4 Qalabka galmada
2.5 Wixii gastronomic ah
Difaacayaasha iyo sharaf dhaca Maalinta Jacaylka
Doodda ay adeegsadeen kuwa ugu weyn ee maanta dhaleeceeya ayaa ah in jacaylka maalin kasta la xuso. Maahan maalin qaas ah in la muujiyo waxa lamaanaha isjecel. Si kastaba ha noqotee, mid walibana wuu u dabbaaldegaa oo muujiyaa jacaylka sida uu jecel yahay. Maalintani waxay noqon kartaa cudurdaar qumman oo lagu sameeyo qorshe ka baxsan hawl maalmeedka maalinna la qaata wakhti wacan lamaanahaaga Dad badan ayaa ka faa'iideysta maalintan inay naftooda ku qancaan.
Dhibaatada tan leh ayaa ah, sanadba sanadka ka dambeeya, waa inaad ka fikirtaa waxa qorshaha ama hadiyada la qabanayo. Wax kasta oo qorshaheenna ama fikradda hadiyadda ah, waa inay noqotaa mid asal ah, oo looga adeegto sidii looga baxsan lahaa howlaha jira. Waxay noqon kartaa si dhammaystiran faahfaahin tilmaamaysa xusuus qurux badan.
Arrin kale oo xiise leh ayaa ah inaadan u baahnayn lamaane ku raaxeysta Maalinta Jacaylka. Sidoo kale waad layaabi kartaa xubin qoyskaaga ah ama saaxiib aad qadarin weyn u hayso.
Maalinta fikradaha hadiyadaha Maalinta Jacaylka
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan ogaanno waa dhadhanka ama hiwaayadaha qofkani haysto. Iyada oo ku saleysan tan, waxaan si fiican u garaaci karnaa hadiyadda ama faahfaahinta. Tusaale ahaan, haddii rafiiqayagu jecel yahay caloosha, waxaan kugu faraxsiin karnaa is biirsaday ama khamri wanaagsan, ama waxaan kugu raaxeysan karnaa marin gastronomic ah. Waxaad ka iibsan kartaa macaan ama macmacaan annaga ayaynu samaynay.
Marka xigta, waxaan siineynaa xoogaa soo jeedin hadiyado ah Maalinta Jacaylka iyadoo kuxiran dhadhanka qofka aad rabto inaad kadiso.
Casho jaceyl ah oo muusig toos ah la socota
Haddii lammaanahaagu uu jecel yahay muusikada, hadiyad kaamil ah waxay noqon doontaa boos celin makhaayad leh muusig toos ah. Deegaankaan waxaad kula raaxeysan kartaa shirkadda qado wanaagsan jawi habboon. Si loo kordhiyo layaabka, waxaad ku bilaabi kartaa hadiyadda album ama maqaalka baayacmushtarka ee kooxda muusikada aad ugu jeceshahay. Markay fiidkii makhaayadda dhammaato, waad kula yaabi doontaa isaga tigidhka xafladda kooxda aad waligaa ku riyoon jirtay ama iidda ugu awoodda badan xilligan.
Haddii lammaanahaagu jecel yahay dabeecadda, waxa ugu habboon ayaa noqon lahaa inaad siiso isaga wax la xiriira. Ma jeclaan lahayd inaad ku hoydaan guri geed ku yaal? Waa hubaal inay tahay khibrad sixir ah. Haddii lammaanahaagu uu jecel yahay dabeecadda, way jeclaan doonaan waayo-aragnimadan. Guryaha geedaha hada waa la kireysan karaa habeenki dalxiiska miyiga. Haddii aad ku darto casho wanaagsan nal shumac tan, hadiyaddu iyadaa iska hadlaysa.
Haddii adiga iyo lammaanahaagu aad jeceshihiin isboorti, ma jiraan wax la mid ah inaad ka bilowdaan tababar gaar ah. Halkaani waa halka lamaanahaagu uu ku bari doono sida ugu habboon ee looga helo foomkaaga jireed. Si tan loo sameeyo, waa inaan marka hore iska wargelinno arrintaas. Hawsha tababarkaani waa tan ugu habboon, maadaama ay tahay inay ku lug lahaato waqti ka hor Maalinta Jacaylka. Markuu tababarku dhammaado waxaan ku siin doonnaa xirmo ay ku jiraan dhammaan qalabka lagu jimicsado.
Kaddib layaab uu ku qaadan doono xirmada, waxaad kula sii yaabi doontaa xitaa inbadan oo aad ku sii heysato Boos loogu talagalay lamaanayaasha. Waqtigani waa waqtigii la muujin lahaa hadiyad kale oo xitaa indho qabad badan leh. Intaad ku jirto fadhiga Spa, gebi ahaanba nasato, waxaad u sheegi kartaa inaad haysato tikidhada dhacdada ka reeban. Dhacdadani waxay noqon kartaa ciyaar kubbadda cagta ah, kubbadda koleyga, qaaciddada 1aad, mootada, teniska, baaskiil wadista, iwm. Tani waxay ku xirnaan doontaa dhadhanka lamaanaha.
Maalinta Jacaylka sidoo kale waa maalin xiiso badan. Haddii aad rabto inaad ku raaxaysato Maalinta Jacaylka, waxaad isku dayi kartaa qalabka galmada. Alaabta caruurtu ku ciyaaraan ayaa loo isticmaalay in lagu ciyaaro lamaanaha oo lagu raaxeysto leh shanta dareen.
Maalinta Jacaylka waa maalin wanaagsan oo lagu tijaabiyo saamaynta erotic ee promromones-ku leeyihiin. Qalabkaas caruurtu ku ciyaarto waxaad ku abuuri kartaa jawi dhow oo ka dhexjira ulaha fooxa. Baararkaani waxay gacan ka geystaan ​​isu-geynta waxyaabaha udgoon ee u adeega dhiirrigelinta xiisaha ay leedahay mahadcelinta pheromones. Xitaa hadaadan arag iyaga oo aadan udgoonayn Pheromones-kan ayaa kugula jaan qaadi doona.
Ciyaar kale waxay noqon kartaa in la isticmaalo wax indhaha kiciya. In kasta oo labbiska ugu dhudhunku aanu wakhti dheer kugu sii noolaan doonin, waa mid ka mid ah faahfaahinta ugufiican ee lagu bilaabo kicinta lammaanahaaga. Waxa kale oo aad dooran kartaa nooc jacayl badan oo aad ku xasuusan karto dhammaan heesaha calaamadeeyay xilliyada ugu fiican.
Wixii gastronomic ah
Kuwa jecel gastronomy, u isticmaal tan Maalinta Jacaylka. Waxa ugu horeeya waa inaad kubilaabataa fiidnimo abaabulan oo aad ku noqonaysid madaxa cunto kariye. Halkan ayaa ah meesha aad ka abaabuli karto suxuun kala duwan oo wehelkaagu jecel yahay oo aad ugu diyaariso si taxaddar iyo daryeel leh. Waad isticmaali kartaa shumacyo, muraayadaha khamriga, muusikada asalka ah iyo ubaxyada qaarkood si loo kordhiyo faahfaahinta shaxda.
Marka jawigan la abuuro, waxaad ku raaxeysan kartaa gastronomy guriga. Ka dib markaad dhadhamiso macmacaanka waxaad tusi kartaa hadiyaddiisa muddada dheer la sugayay: koorso karinta ama aqoon isweydaarsi leh mid ka mid ah kuwa ugu caansan xilligan. Intaa waxaa dheer, waad siin kartaa isaga dhammaan qalabka lagama maarmaanka u ah si aad uga qayb gasho fasalladaada. Faahfaahintani xoogaa way qaali noqon kartaa laakiin maahan khiyaano, laakiin waa dhiirrigelinta hal-abuurkooda iyo tababbarkooda. Hadiyaddan marna ma ilaawi doontid.
Waxaan rajeynayaa in talooyinkaan aad la imaan karto qorshe ama aad ku iibsan karto hadiyad aad u weyn maalinta Jacaylka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Qorshooyinka Maalinta Jacaylka iyo hadiyadaha